नेपाल Archives - Page2of 12 - Pardeshi Khabar
Post by: Naina Rai प्रकाशीत मिति: August 26, 2019
९ भदौ, काठमाडौं । शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या दरुत्साहनको मुद्दा खेपिरहेका टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेले यसबारे कार्यक्रम चलाउन नपाउने भएका छन् । जिल्ला अदालत चितवनमा थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले लामिछानेसँग ५ लाख, युवराज कँडेलसँग ३ लाख धरौटी माग गरेको छ । अर्की अभियुक्त अस्मिता भनिने रुकु कार्कीलाई भने साधारण तारेखमा रिहा गरेको छ । अदालतको अनुमतिमा मात्र रविले विदेश जान पाउने आदेश छ । साथै उनले यो मुद्दाबारे आफ्नो टेलिभिजन कार्यक्रम चलाउने पाउने छैनन् । लामिछाने सञ्चालक रहेको ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रमका पूर्व पत्रकार पत्रकार पुडासैनी २० साउनमा चितवनकोफुर्सदमा
अन्तत: रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दर्ता, के भेटियो अनुसन्धानमा ?
Post by: Naina Rai प्रकाशीत मिति: August 25, 2019
८ भदौ, काठमाडौं । शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा टेलिभजन प्रस्तोता रवि लामिछानेसहित तीन जनाविरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा दर्ता भएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को सहयोेगमा १० दिन लामो अनुसन्धानपछि चितवन प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत आइतबार लामिछाने, युवराज कँडेल र अस्मिता भनिने रुकु कार्कीविरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा दर्ता गरेको हो । लगत्तै वयान सुरु भयो । आइतबार अभियुक्त अस्मिता भनिने रुकु कार्कीको वयान सकिएको छ । तर, रवि र युवराज कँडेलको वयान बाँकी नै रहेकाले भोलि सोमबार बिहान १० बजे उपस्थित गराउने गरी तीनैजनालाई प्रहरी हिरासतमा पठाइएको जिल्ला अदालत चितवनकाफुर्सदमा
Post by: Naina Rai प्रकाशीत मिति: August 22, 2019
०५ भदौ, काठमाण्डौl सरकारले भदौ १, २ र ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय बिहीबार एकैपल्ट सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक भएका हुन्। सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले भदौ १, २ र ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय एकसाथ सार्वजनिक गरेका हुन्। साभार: अन्नपुर्ण पोष्टबाट गरिएको हो l २६ निर्णय जस्ताको तस्तै
नेपाल ताजा खबर, नेपाली खबर, बिशेष समाचार, राजनीति, राष्ट्रिय समाचार No Comments »
Post by: Naina Rai प्रकाशीत मिति: August 21, 2019
४ भदौ, काठमाडौं । काठमाडौंको नयाँ बसपार्कमा एक जोडी महिला र पुरुष मृत अवस्थामा भेटिएका छन् । बसपार्कको मोरङ पर्वत गेस्ट हाउसको कोठा नं. १११ मा चितवनका ३७ वर्षीय यमबहादुर मगर र मकवानपुरकी ३० वर्षीया सबिता भनिने सबिना बजगाईं मृत भेटिएका हुन् । महानगरीय प्रहरी वृत्त, महाराजगञ्जका डीएसपी फणिन्द्र प्रसाईंले घटनास्थलको प्रारम्भिक मुचुल्का उठाएर अनुसन्धान थालिएको अनलाइनखबरलाई बताए । ‘कट्टु मात्र लगाएको अवस्थामा युवतीको शव खातको तलपट्टी र युवकको खाटमाथि भेटिएको थियो’, उनले भने, ‘कसरी मृत्यु भयो भन्ने बारे छानविन भइरहेको छ ।’ प्रहरीका अनुसार, उनीहरु राति ११ बजे होटलमाफुर्सदमा
नेपाल ताजा खबर, नेपाली खबर, प्रमुख समाचार No Comments »
उपत्यकामा ५५ जनामा भेटियो डेंगुको संक्रमण
४ भदौ, काठमाडौं । उपत्यकामा पनि डेंगु संक्रमित भेटिएका छन् । पूर्वी नेपालमा फैलिएको डेंगु नियन्त्रणमा आउन नसकिरहेको बेला काठमाडौं उपत्यकामा पनि संक्रमितहरू भेटिएका हुन् । इपिमिडियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा. विवेककुमार लालकाअनुसार उपत्यकाका १० वटा अस्पतालमा आएका मध्ये ५५ जनामा डेंगु संक्रमढ देखिएको छ । यद्यपि यो सङख्या अझै बढ्न सक्ने उनले बताए। महाशाखाले २३ वटा अस्पतालबाट तथ्याकं संकलन गरेको थियो । डाक्टर विवेक कुमारका अनुसार काठमाडौं उपत्यका तथा अन्य स्थानमा डेंगु सार्ने लामखुट्टेका दुवै प्रजाति भेटिएको छ । गत वर्ष यही समयमा उपत्यकामा मात्रै १६ जनालाईफुर्सदमा
नेपाल ताजा खबर, नेपाली खबर, बिशेष समाचार, स्वास्थ्य सम्बन्धी No Comments »
४ भदौ, काठमाडौं । अब घरेलु कामदारले पुनः श्रम स्वीकृति पाउने भएका छन् । घरेलु कामदरका रुपमा प्रायः जसो नेपालबाट महिलाहरु नै विदेश पुग्छन् । बुधबार बसेको संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकले केही शर्त पुरा गर्ने घरेलु कामदारलाई नेपाल आएर विदेश फर्किन बाटो खुला गर्ने निर्णय गरेको हो । तर, नयाँ घरेलु महिला कामदारमाथिको रोक भने कायमै रहनेछ । समिति सदस्य कांग्रेस सांसद प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ले मालिक तथा रोजगारदाताबाट सम्बन्धित महिला कामदारले ‘सुरक्षित’ रहेको स्वघोषणा पत्र र सोही देशको दूतावासले पनि श्रम इजाजत नवीकरणफुर्सदमा
नेपाल ताजा खबर, नेपाली खबर, प्रवास, बिशेष समाचार No Comments »
सिंहदरबारमा मृत भेटिएका कर्मचारीले ‘सूसाइड नोट’मा यस्तो लेखे
Post by: Naina Rai प्रकाशीत मिति: August 20, 2019
०३ भदौ, काठमाडौं l सिंहदरबारमा मृत भेटिएका कर्मचारी बच्चुराम केसी अन्ततः आत्महत्या गरेको बुझिएको छ । उनले एक सूसाइड नोट समेत लेखेको भेटिएको छ । जहाँ उनले घर व्यवहार मिलाउन नसकेर आत्महत्या गरेको उल्लेख गरेको कुरा प्रहरीले जनाएको छ । एक प्रहरी निरीक्षकले जनाएअनुसार उनले सूसाइड नाेटमा घर खर्च चलाउन नसकेर आत्महत्या गरेको उल्लेख छ । उनले नोटमा लेखेका छन्, ‘घरव्यवहार मिलाउन नसकेर यस्तो निर्णय गरेँ, यसमा कसैको दोष छैन । मिडियावाजी नगर्नू र चिन्ता नगर्नू ।’ उनको शव अहिले पोष्टमार्टमका लागि टिचिङ अस्पतालमा राखिएको छ । सिंहदरबारभित्र कर्मचारी मृतफुर्सदमा
सिंहदरबारभित्र कर्मचारी मृत भेटिए
काठमाडौं : राष्ट्रिय योजना आयोग भवनमा एक कर्मचारी मृत भेटिएका छन्। आयोगमा कार्यरत नायब सुब्बा करिब ५० वर्षीय बच्चुराम केसी मृत भेटिएका हुन्। केसी आयोग कार्यालयमा रहेको अनुगमन तथा मूयांकन महाशाखाको सभाहलमा मृत भेटिएका प्रहरीले जनाएको छ। उनी सभाहलमा ढलिरहेको अवस्थामा देखेपछि बिहान पौने १० बजे आयोगकै कर्मचारीले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। अहिले शव भेटिएको आयोग परिसर सिल गरिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग मन्त्रालय तथा अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयहरू रहेको सिंहदरबारभित्र छ। मृतक केसीको शव भेटिएको स्थानमै सेल्फस नामक विषादीको बट्टा पनि भेटिएको काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रवता डीएसपी होबिन्द्र बोगटीलेफुर्सदमा